ဓါတ်ပုံ Album (7)
မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘေးကူမှတ်တမ်း (5)
ပြည်သူ့ ဂုဏ်ရည် ဆု (2)
Friday, 04 September 2015 04:04
အင်္ဂပူ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ ( သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် )
Written by LPG
သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း
‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ နှင့် လုပ်အားပေးများ အင်္ဂပူ ဒေသသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ရေဘေးကူပစ္စည်းများကို ဒေသခံများသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
Published in မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘေးကူမှတ်တမ်း
Friday, 04 September 2015 04:03
သက်ကယ်ကျွန်း ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ ( သြဂုတ်လ ၉ ရက် )
သြဂုတ်လ ၉ ရက် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း
‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ နှင့် လုပ်အားပေးများ သက်ကယ်ကျွန်း ဒေသများသို့ ကုန်းတတန် ရေတတန်သွားရောက်ခဲ့ပြီး ရေဘေးကူပစ္စည်းများကို ဒေသခံများသို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
Friday, 04 September 2015 04:01
ညောင်တုန်းမြို့နယ်ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ ( သြဂုတ်လ ၉ ရက် )
‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ နှင့် လုပ်အားပေးများ ညောင်တုန်းနှင့် သက်ကယ်ကျွန်း ဒေသများသို့ ကုန်းတတန် ရေတတန်သွားရောက်ခဲ့ပြီး ရေဘေးကူပစ္စည်းများကို ဒေသခံများသို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
Friday, 04 September 2015 04:00
‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ( သြဂုတ်လ ၈ ရက်၊ ၉ ရက် )
(၁) သြဂုတ်လ ၈ ရက်
‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ နှင့် လုပ်အားပေးများ မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း အလုပ်ရုံတွင် ရေဘေးကူပစ္စည်းများကို လုပ်အားပေး ထုပ်ပိုးပြီး ‘ မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ စာသင်ကားပေါ်တင် ခဲ့သည်။ ( ဓါတ်ပုံ နံပါတ် ၁ - ၈၂)
(၂) သြဂုတ်လ ၉ ရက်
ညောင်တုန်းနှင့် သက်ကယ်ကျွန်း ဒေကများသို့ ပို့ရန် ကားများဖြင့် သယ်ခဲ့ပြီး ၉ ရက်နေ့တွင် ကားပေါ်မှ လှေပေါ်သို့ပြောင်းတင်ခဲ့ကြသည်။( ဓါတ်ပုံ နံပါတ် ၈၃ - ၉၂)
Friday, 04 September 2015 00:42
+မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘေးတွက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းနှင့် myME အဖွဲ့ တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘေးတွက်ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းနှင့် myME အဖွဲ့ တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ။
ပူးတွဲပါ ဓါတ်ပုံများမှာ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၇ ရက် နေ့က myME ရုံး တွင် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းနှင့် myME အဖွဲ့တို့မှ လုပ်အားပေးများဖြင့် ပြင်ဆင်နေပုံ
Donated food and emergency supplies from #COBA Chapters and families arrived to #myMEproject office yesterday(August 6,2015) . COBA members, myME members and devoted volunteers will be heading over to Irrawaddy Delta region; Nyaung-Don (ညောင်တုန်း), Thet-Ke-Kyun (သက်ကယ်ကျွန်း), and Ingapu (အင်္ဂပူ) on Sunday to hand them over to flood victims.
Saturday, 13 June 2015 22:07
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဆဋ္ဌမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ကြေညာဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနား -ယူတီကာမြို့-မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဆဋ္ဌမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ကြေညာဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနား မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
နေ့ရက် ။ ။ ၂ဝ၁၅ ခု ဇွန်လ (၇) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့
အချိန် ။ ။ နံနက် (၉) နာရီ မှ ညနေ (၅) နာရီ
ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနားကို နေ့လယ်(၁)နာရီတိတိ အချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး
အခမ်းအနား မစတင်မီ အကျွေးအမွေးဖြင့် ဧည့်ခံပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ဒေသခံများ၏ အဆိုအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
Published in ပြည်သူ့ ဂုဏ်ရည် ဆု
Saturday, 13 June 2015 21:31
Photo Album:5th CoBA Award Ceremony in Yangon June 1, 2014 (234 Photos) - ပဉ္စမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား ( ဓါတ်ပုံ ၂၃၄ ပုံ မှတ်တမ်း)
Photo Album:5th CoBA Award Ceremony in Yangon at Royal Rose on June 1, 2014 (234 Photos)
- ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်(တနင်္ဂနွေ)နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ အမှတ် ၂၂၁/၂၂၃ ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီမှာ ကျင်းပတဲ့ ပဉ္စမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား ( ဓါတ်ပုံ ၂၃၄ ပုံ မှတ်တမ်း)
You are here: Home သတင်းနှင့်မှတ်တမ်း Documentations မှတ်တမ်းများ Records ဓာတ်ပုံ Photos ဓါတ်ပုံ Album ဓါတ်ပုံ Album